Nairobi:- Waxaa qarax loo adeegsaday miinada dhulka lagu aaso maanta lagula eegtay gaari ay saarnaayeen ciidanka dalka Kenya, qarax ayaa waxaa uu ka dhacay degmada Mandheere ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. Sarkaal u hadlay ciidanka milateriga Kenya Col. Cyrus Oguna ayaa sheegay in qarax miinada ee lala eegtay ciidankoodu ay ku dhaawacmeen ilaa 5 askari waxaana dhintay 1 askari.
Col. Cyrus Oguna oo u hadlay milateriga Kenya ayaa ku edeeyey urruka Al-shabaab in ay ka danbeeyaan qarax lagu weeraray ciidankooda isagoo aad uga gaabsaday in uu faahfaaahin buuxda uu ka bixiyo qarax .
Ilo wareed ku sugan degmada Mandheera ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ayaa sheegay in uu jiro qaraxa miinada indhihiisana uu ku arkay gaari ay la socdeen ciidanka dalka kenya oo gubanaya iyo askar laga soo saarayo gaariga dhexdiisa.
Ururka Al-shabaab ayaa sheegatay in ay ka danbeeyeen qarax lagu weeraray gaariga ay saarnaayeen ciidanka Kenya waxaan ay xuseen in ay askar badan ay ku dileen weerarkaas iyagoo ku goodiyey in weeraro aargoosi ah ay la beegsan doonaa ciidanka Kenya iyo xaruma hooda .
Ilaa iyo intii ay ciidanka dalka Kenya ay galeen gudaha Soomaliya ayaa waxaa soo kordhaysay khasaaraha ay gaarsiiyeen dad rayid ah oo Soomaali ah oo ay ku weerareen diyaarado halka ciidamadoodana weeraro dhowr ah oo gaadmo ah khasaaro uu ka soo gaaray